Zvakanakira uye zvinokanganisa zveShared Hosting | ECommerce nhau
Zvakanakira uye zvipingaidzo zvekugovana kugovera
Panguva ino tinoda kutaura newe nezve iyo mabhenefiti uye zvinokanganisa zvekugovana kugovera. Kutanga isu tichatanga nekutaura kuti iyo Yakagovaniswa webhu inomiririra ibasa apo nhevedzano yemapeji ewebhu anotarisirwa pane imwechete server. Izvi zvinozivikanwa se webhu kuronga chirongwa kana "Yakagovaniswa Kubata Chirongwa".
1 Chii chinonzi kugovana kwakagovaniswa?
2 Kubatsira kwekugovana Kugovana
3 Kukanganisa kwekugovana kwekugovana
Chii chinonzi kugovana kwakagovaniswa?
Mune yakagovaniswa webhu inomiririra, zvese server zviwanikwa zvakagovaniswa pakati pese saiti akaitirwa pane server. Izvi zvinosanganisira bandwidth, diski nzvimbo, FTP maakaunzi, dhatabhesi, kuwedzera kumaemail account.
Iko hakuna huchokwadi huwandu hwe mawebhusaiti ayo anogona kuitirwa pane imwechete server, saka huwandu uhwo hunogona kuve chero kubva pamakumi mashoma kusvika kumazana kana kunyange zviuru. Ichi chimiro chemidziyo yakagovaniswa ndicho chikonzero chikuru nei izvi zvirongwa zvekubata webhu kazhinji zviri zvakachipa uye zvichitengeka.
Kubatsira kwekugovana Kugovana
Kugovana Kugovera zvirongwa zvinopa huwandu hukuru hwezvakanakira, pakati pazvo zvinotevera kumira pachena:
Shared Hosting yakachipa ichienzaniswa neDedicated Hosting uye VPS Hosting.
Server manejimendi uye kugadzirisa ibasa remubati wekutambira
Hapana chakakosha kana chemberi ruzivo rwehunyanzvi runodikanwa kubata webhusaiti pane yakagovaniswa yekutambira
Akaundi maemail maakaunzi ane yavo duraini anowanikwa
Iko kune rutsigiro rweMySQL uye PHP
Kukanganisa kwekugovana kwekugovana
Kunyangwe paine mabhenefiti ekugovana kugovana, zvakare ichokwadi kuti iyi mhando yekugamuchira ine zvimwe zvinokanganisa. Semuyenzaniso:
Matambudziko ekuchengetedza pane sevha sezvo achiwanzo kukanganiswa nekurohwa, software yakaipa iyo inokanganisa nzvimbo dzese dzakachengetwa pane server
Kana uchigovana zviwanikwa nemamwe masayiti, vanoona zvishoma nezvishoma maitiro uye kurodha saiti
Pane zvausingakwanise maererano nendangariro, diski nzvimbo uye CPU
Iyo yekutambira chirongwa inogona kunge iine mashoma maficha uye mashandiro achienzaniswa neakazvitsaurira ekugamuchira
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » nemitambo » Zvakanakira uye zvipingaidzo zvekugovana kugovera
SEO inofanirwa sei kuve yewebhusaiti yezvikafu?